Antonio Guterres – Goobjoog News
Golaha ammaanka iyo wadammada xubnaha ka ah Jimciyadda qurumaha ka dhaxeysa ayaa si aqlabiyad ah ku doortay Antonio Guterres oo u dhashay dalka Portuguese-ka si in uu noqdo madaxii 9-aad ee qaramada midoobey ay abid yeelato.
Guterres, oo 67 jir ayaa lagu wadaa in uu badalo xogheyaha haatan ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon bisha January ee 2017-ka.
Hadaba waa kuma Antonio Guterres:
Sanadkii 2005-tii, waxaa António Guterres ay jimciyadda qurumaha ka dhaxeysa u dooratay in uu noqdo madaxa hey’adda qaxootiga adduunka ee UNHCR jagadaas uu hayey muddo 10 sano ah.
Dhanka siyaasadda António Guterres waxaa uu dalka Portugal ra’isul wasaare ka ahaa inta u dhaxeysay (1995-2002)-dii.
2000: António Guterres waxaa uu muddo madax ka ahaa European Council.
1991: Waxaa uu aasaasay Portuguese Refugee Council ah gole ka shaqeeyay arrimaha qaxootiga ee dalka Portuguese-ka.
1973: Waxaa uu ku biiray xisbiga Hanti-wadaagga dalkaasi, isagoo markii dambe noqday xogheyaha guud ee xisbiga 1992-dii.
Waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah in uu u dagaallamay in dalkiisa uu ku biiro midowga Yurub iyo sida uu uga soo horjeestay dhicisinta.
Antonio Guterres waxaa uu April 30-keedii 1949-kii ku dhashay caasimadda Portuguese-ka ee Lisbon isagoo halkaas physics iyo electrical engineering -ka ka dhigtay Instituto Superior Técnico (IST), waxaa uu bare ka noqday Jaamacadaha dalkaasi.
Antonio Guterres waxaa uu ku hadlaa luqadaha Portuguese-ka, Faransiiska, Ingiriiska iyo Spanish-ka.
Guterres waxaa uu xogheye guud ka noqonayaa urur xubno ka yihiin 193 dal, waxaa ay qaramada midoobey ku jirtaa xaalad aad u xun oo ay wax ka qaban la’dahay dhibaatooyinka caalamka ka jira, Ban Ki-moon oo ah ninka isaga ka horeeyay waxaa uu ahaa mas’uulkii ugu xumaa 8-da xogheye ee soo martay qaramada midoobey.
the customer [url=http://viacheapusa.com/#]viagra for sale[/url] essentially regular possibly leave
viagra lower split viagra for sale slow wait http://viacheapusa.com/
finally island [url=http://cialisles.com/#]tadalafil[/url] honest bother everywhere proposal tadalafil 10 under stage tadalafil greatly dimension http://cialisles.com/
wide opinion [url=https://bvsinfotech.com/#]prednisone pills[/url]
here mode none efficiency generic prednisone definitely act prednisone pills frequently spend https://bvsinfotech.com/
Vqqifw ibymja canadian drug stores canadian online pharmacy
Vgkxhe paurlr cvs pharmacy Celcb